ဒါမျိုး ဖြစ်သင့်ရဲ့လား …….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဒါမျိုး ဖြစ်သင့်ရဲ့လား ……..
ဒါမျိုး ဖြစ်သင့်ရဲ့လား ……..
Posted by နွယ်ပင် on Jul 21, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 52 comments
ဒိပိုစ့်ကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူ့တွေ့ကြုံလာတဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်အကြောင်းပြောပြလာလို့ ရေးဖြစ်တာပါ
အခုတစ်လော အင်တာနက်ဆိုင်တွေက ဟိုနေရာ ဒီနေရာမှာ မှိုလိုပေါက်လာကြတာ တော်တော်လေးကိုများတယ် ။ ဒါပေမယ့် လိုင်းကောင်းတဲ့ ဆိုင်ကတော့ သိပ်မရှိလှဘူးပဲ အဲတော့ လိုင်းကောင်းတဲ့ ဆိုင်ကို သွားပြီး သုံးကြတဲ့ သူတွေအများကြီးပါ ။ ဒီလိုပဲ သူငယ်ချင်းကလဲ အနီးအနားမှာ အင်တာနက်ဆိုင် ၇ှိတာတောင် မသုံးပဲ သူသုံးနေကျ ဘားလမ်းထဲ က အင်တာနက်ဆိုင်ထဲမှာ အမြဲလို သွားသုံးဖြစ်ပါတယ် ။သူ့အမျိုးသားကလဲ သဘောင်္သားဆိုတော့ မြို့တစ်မြို့ကို ကမ်းကပ်ပြီဆို သူ့မှာ အင်တာနက်ဆိုင်ကိုပြေးပြီး ဖုန်းခေါ်ရတာလဲ အမောပေါ့ အရင်တုန်းက Pfingo ကို ဝယ်ပြီး အလုပ်မှာ ခေါ်ဖြစ်ပင်မယ့် အခုနောက်ပိုင်း Pfingo က ဝယ်ဖို့ အဆင်မပြေတော့ ဘားလမ်းထဲက အင်တာနက်ဆိုင်ကိုပဲ အမြဲလိုလို သွားပြီး ခေါ်ဖြစ်တာ အမြဲတမ်းဖောက်သည်လိုတောင်ဖြစ်နေလောက်ပါပြီ ။အဲနေ့ကတော့ သူ့အမျိုးသားက မလေးရှားမှာ ကမ်းကပ်နေပြီဆိုတာနဲ့ သူလဲ ညနေ အလုပ်ဆင်းတော့ မိုးတွေ၇ွာနေတဲ့ကြားက ဖုန်းသွားခေါ်ဖြစ်တာပေါ့။ မိုးကရွာနေတော့ ဆိုင်ထဲ ဝင်ခါနီးက ဆိုင်က ကောင်မလေးက ထီးကိုယူထားပြီး နံပါတ်တစ်ခုကိုလဲ သူ့ပေးလိုက်တယ် ” အပြန်ကျမှာ ထီးယူပါအစ်မ ဆိုင်ထဲမှာရေတွေစိုနေမှာဆိုးလို့ ဆိုတော့ ” သူကလဲ အပ်ထားဖြစ်ခဲ့တယ် ။ ဒါပေမယ့် အဲ့နေ့က မိုးကလဲ အရမ်းရွာနေတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း အင်တာနက်ကနေ တစ်ဆင့် ဖုန်းခေါ်တာလဲ လိုင်းကကျနေတာပေါ့ ဒါပေမယ့် သူခေါ်တာ သုံးမိနစ်ဝင်သွားလို့ဆိုပြီး (3) မိနစ်ခေါ်ဆိုခ (500) ကျပ်ပေးရမယ်ပေါ့ အမှန်က တစ်မိနစ်ကို (150)ဆိုတော့ ယူရမှာက (450) ပါ ၊သူတို့က အကြွေအမ်းစရာမရှိလို့ 500 တောင်းတာပါဆိုတော့ သူငယ်ချင်းကလဲ အေးအေးဆေးဆေးပဲ 50 လောက်နဲ့ မပြောချင်တော့ ပေးခဲ့တာပေါ့ ။ပြီးတော့ ထီးပြန်ယူဖို့ ကဒ်ကိုလဲ ပေးလိုက်ရော သူ့ထီးက မ၇ှိတော့ဘူး သူ့ထီးနဲ့ အဆင်အတွေးတူတဲ့ ထီးစုတ်လေး တစ်ချောင်းကိုပဲ တွေ့ရတယ် သူ့ကိုပေးလိုက်တဲ့ နံပါတ်က (30) အခုကျန်ခဲ့တဲ့ ထီးရဲ့ နံပါတ်က (52) ဆိုတော့ ဆိုင်ကဝန်ထမ်းကောင်မလေးတွေမှားပေးလိုက်တာပေါ့ ။ သူငယ်ချင်းက မိုးလဲချုပ် နောက်လဲနောက်ကျဆိုတော့ ထီးကို ပြန်၇ှာထားပေးပါ နောက်နေ့မှ ပြန်လာယူမယ်ပြောတော့ ဆိုင်ရှင် တရုတ်မကြီးကအစ နောက်နေ့ လဲ ထားပေးမယ်လို့ပြောပြီး သဘောတူလိုက်တယ် ။ ဒါပေမဲ့ နောက်နေ့လဲ ထီးလဲသွားယူရော သူငယ်ချင်းကို ဆိုင်ရှင်တရုတ်မကြီးက အပြတ်ကော်လွတ်ပါသတဲ့ သူငယ်ချင်းကလဲ မဟုတ်မခံဆိုတော့ သူတစ်ခွန်း ကိုယ်တစ်ခွန်းပြောပြီး ရန်ဖြစ်မလိုတဲ့ အထိပါဖြစ်ကြတာပေါ့ ။ဆိုင်ထဲမှာလဲ အင်တာနက် သုံးနေတဲ့ သူတွေပါ၇ှိတော့ အကုန်လုံးက ဝိုင်းကြည့်နေကြပါတယ် ။ဒါတောင် ဆိုင်က သူတို့ယူထားတာ မဟုတ်လို့ တာဝန်မယူနိုင်ပါဘူးလို့ချည်း ဇွတ်ပြောနေတာ အမှန်က သူ့ဝန်ထမ်းကောင်မလေး န့ပါတ်မှားပေးလိုက်တာကို သိသိချည်းနဲ့ ဆိုင်ရှင်မိန်းမက ဖိအော်နေတာ နောက်တော့ သူငယ်ချင်းက တာဝန်မယူနိုင်လဲ ရတယ် ဒီလောက်ဆက်ဆံရေး မကောင်းတဲ့ဆိုင် နောက်ဘယ်တော့မှ မလာဘူးတစ်ခြားသူတွေကိုလဲ ပြောပြမယ်ဆိုပြီး ပြန်လာတော့ သူ့မှာ ဒေါသတွေထွက်ပြီး အသံတွေတောင်တုန်နေတာ ။ အမှန်က သူငယ်ချင်းကပြောပါတယ် ထီးတန်ဖိုးက (10000) တောင်မကျော်လို့ ဘာမှ မဖြစ်ပင်မယ့် ဆိုင်ရှင် မိန်းမကြီးရဲ့ အပြောအဆိုနဲ့ သူ့ဆိုင်က ဝန်ထမ်းမှားတာကို တာဝန်မယူလို့ ဒီလောက်ထိ စကားပြောဖြစ်ရတာပါတဲ့ ။ စကားကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောပြီး အဆင်ပြေအောင်ပြောရင် သူလဲ ဒီလောက်ထိ ပြောဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ အခုကျတော့ ဆိုင်ရှင်မိန်းမကြီးက စကားကို မောက်မောက်မာမာနဲ့ အော်ကျယ်ကျယ်ပြောတော့ အခုလိုတွေဖြစ်ကြတာပေါ့ ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အခုကျတော့ ဆိုင်ဘက်ကဆိုရင်လဲ Customar တစ်ယောက်လျော့ သလို (သူက တစ်ခါဖုန်းပြောရင် အနည်းဆုံး တစ်နာရီလောက်ပြောတက်လို့ တစ်လကို အဲ့ဆိုင်မှာ လေး/ငါးသောင်းဖိုးလောက် အားပေးနေသူပေါ့) အခု သူငယ်ချင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဲ့ဆိုင်မှာဖုန်းပြောနေတဲ့ သူတွေကလဲ မသွားကြတော့ဘူး
သူငယ်ချင်းဘက်ကကြည့်ရင်လဲ သူ့အတွက် လိုင်းကောင်းပြီး ဖုန်းပြောရအဆင်ပြေမယ့် အင်တာနက်ဆိုင်ကို ၇ှာရဦးမယ် ။
သူငယ်ချင်းပြောပြတာကို နားထောင်ရင်း နွယ်ပင်သိလိုက်တာက လူတော်တော်များက နှုတ်ချိုတာ စကားပြော ပြေပြစ်တာ
အချိန်အခါကိုလိုက်ပြီး ပြေပြစ်တဲ့ ဆက်ဆံေ၇းနဲ့ ဝန်ဆောင်မူသေသေချာချာပေးနိုင်တာကိုပဲ ကြိုက်ကြတာဆိုတာပေါ့ …
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လောကမှာ နှုတ်ချို သျှိုတစ်ပါး တဲ့ စကားပြောပြေပြစ်ရင် လေယာဉ်ပျံတောင် အလကားစီးလို့ရတယ်ဆိုပဲ
ဘားလမ်းထဲကမှာ ဆိုလျှင် Net Sky ဆိုတဲ့ ဆိုင်များလား နွယ်ပင်ရဲ့ … ။ ဆိုင်နာမည်လေးပါ ထည့်ရေးသင့်ပါတယ်။
အများနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ မှာ စိတ်ပါလို့ ပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်မပါပဲနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် မျက်နှာ အမူရာ ၊ အပြောအဆိုကို တတ်နိုင်သလောက် လျှော့ချပြီး ချိုချိုသာသာလေး ဆက်ဆံမှ မိတ်ပိုရမှာပါ ။
နာမယ်ပါထည့်ရေးမလိုပဲ ကိုယ့်ဇာတ်လမ်းလဲ မဟုတ် သူငယ်ချင်းပြောပြတာဆိုတော့
နောက်ပြီး အဲ့နေ့က သူတို့ ဖြစ်တာကို ဆိုင်ကို လာတဲ့ သူတော်တော်များများကလဲ သိနေတယ်ဆိုတော့
နာမယ်ပါထည့်ရေးရင် သူငယ်ချင်းကို အားနာတာနဲ့ မရေးဖြစ်တာ
ဒါပေမဲ့ ဘားလမ်းထဲက ဆိုင်ဆိုမှတော့ နာမယ်တောင် ထည့်ရေးစရာ မလိုပါဘူးလေ ဟုတ်တယ်မလား
ပထမ နေ့ကတည်းက အပြတ်ရှင်းလာရမှာ … (စကားပြော တင်စီးတဲ့အခါ ..) ဘယ်လိုတာဝန်ယူမှာလဲ ဆိုပြီး သောင်းကျန်းလာခဲ့ရမှာ … ။ ဆိုင်က ဘယ်လို လူမျိုးတွေ ခန့်ထားပါလိမ့်… နံပါတ်လေးတောင် မဖတ်တတ်ကြဘူးလား ။
ကိုယ်တိုင်လည်း အဲလိုကြုံရရင် မetoneလိုစိတ်နဲ့ အပြတ်ရှင်းနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်
ဘယ်နှယ့် ၀န်ဆောင်မှုက ညံ့ပါ့
ခုတော့ ပိုက်ဆံလည်း ပြန်မအမ်းဘူး၊ ဘာမှလည်း မအမ်းဘူး
မြန်မာနိုင်ငံက ဆိုင်တော်တော်များများ ဒီလိုချည်းပဲ
ကိုယ်တွေလည်း အင်တာနက်ဆိုင်သွားသုံးတာ ၆၂၀ကျတာ ၇၀၀ယူတယ်
၂၀စွန်းတာမလျှော့ဘဲ ၈၀ပိုယူတယ် (၆၅၀လောက်ယူလိုက်ပါလားလို့)
ဒုတိယအကြိမ်ကျ ကျွန်မက ၆၂၀ကျတာ ၇၀၀တောင်းရင်တော့ ငါသေချာအောင်မေးကြည့်ဦးမယ်လို့ စဉ်းစားပေမယ့် လက်တွေ့မှာ မမေးဖြစ်ခဲ့ပါကြောင်း
အဲဒါကြောင့် မetoneလို့စိတ်မျိုးလေး တခါလောက်တော့ ထားကြည့်ဦးမယ်
နိုင်ငံခြားဖုံးခေါ်မယ်ဆိုရင် ဆူးလေအ၀ိုင်း (ဗလီဖက်အခြမ်း) က Rain အင်တာနက်ဆိုင်ကိုသုံးကြည့်ပါလား
ကြော်ငြာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်တို့လဲသုံးရတာ တော်တော်အဆင်ပြေလို့ပါ ဆက်ဆံရေး လဲကောင်းပါတယ်..လိုင်းလဲတော်တော်ကောင်းလို့ ညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်…
ဒီတလော ကိုယ်လည်း မမှားပဲ သူများ ကျေနပ်အောင် လေသံ ချိုချို နဲ့ အောင်လ လုပ်နေရတာ.. ဟင်းနော်.. ဒေါသတွေ ဘယ်မှာ သွားထုတ်ရမလဲ..
စိတ်ရှိလက်ရှိ အသက်ကုန် အော်လိုက်ချင်စိတ်ပေါက်တယ်။
ဆိုင်ဝန်ထမ်း ကထီးတလက်တောင် အဆင်ပြေ အောင်မထိမ်းသိမ်း နိုင်တော့ အလုပ်သမား ကို needs more training လို့မှတ်ချက်ချ ရလိမ့်မယ် ။ ပိုင်ရှင် ကဆိုင်ကို စံနစ်တကျ အုပ်ချုပ် နိုင်ပုံလည်ုးံမပေါ်ဖူး ။ ဖြစ်သင့်တာ က ကိုယ့် အလုပ်သမား ကြောင့် ဆိုရင် ဖောက်သယ် ကိုတောင်းပန်ရ မှာ ပေါ့ ။ ဖောက်သယ် မူလထီး အစမပေါ်တော့ ဘူးဆို ရင် အစားဝယ်ပေး ဒါမှမဟုတ် သင့်လျှော် တဲ့ ရော်ကြေး ၊ ဒါမှမဟုတ် နောက်တခါလာ ရင် discount ဘယ်လောက်ပေးမယ် ဆိုပြီး လုပ်ရမှာ ပေါ့ ။ service ကတော့ တကယ် စံမမှီ ဘူး ။
မှန်ပါတယ် zoe ရေ
pa tone says:
ဒိပိုစ့်ကြီးက အမှန်ကောဟုတ်ပမလား….ဒီအချိန်မှာ အင်တာနက်ဆိုင်တော်တော်များများ Pfingo လုံးဝခေါ်ဆိုခွင့်မရှိပါ
သို့အတွက် လုပ်ကြံဖန်တီးကာ Pfingo ခေါ်ပေးနေသော အင်တာနက်ဆိုင်(ဖော်ထုတ်ချင်ကာ) ရှိသေးသလားဟု စုံစမ်း သတင်းနိုက်ခြင်းလဲဖြစ်နိုင်ပါရဲ့….၁လကို အဲ့ဆိုင်မှာ လေး/ငါးသောင်းဖိုးလောက် အားပေးနေသူဟာ ထီး၁ချောင်းတန်ဖိုးနဲ့ အဲလောက်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား…..ဒီခေတ်မှာထီး၁ချောင်း ကဘာဈေးမှရှိ မှမဟုတ်တာ…ငွေ လေး/ငါးသောင်း သုံးနိုင်သူဟာ ဒီလို ထီး၁ချောင်းနဲ့အောက်တန်းကျလိမ့်မယ်မထင်…ဟုတ်သော်ရှိမဟုတ်သော်ရှိ ဒီခေတ်မှာလူတွေစဉ်းစဉ်းစားစားနဲ့ယုံသင့်နေပါပြီ…လူတော်တော်များများ မှာဒီသဘောတွေမပါကျလို့ ခံရပေါင်းလဲမနဲတော့ပါဘူး
နွယ်ပင် ကိုတော့ အားနာပါတယ် ကျေးဇူးတင်လဲပါတယ်…သဘောလေးကိုနားလည်ဖို့ကိုရည်ရွယ်ပါတယ် (ဖမ်းမယ် ဆီးမယ် ပိတ်မယ် ဆို့မယ်ပေါ့ဗျာ) ဘယ်အရာကိုမဆိုစဉ်းစားပြီးယုံကျပါဗျာ
pa tone ကိုတစ်ခုလောက်ပြောချင်ပါတယ်
အင်တာနက်ဆိုင်တွေက Pfingo ခေါ်လို့မရတော့ဘူးလို့ ဘယ်သူကပြောပါသလဲ အင်တာနက်ဆိုင်တော်တော်များများမှာ အခုချိန်ထိ Pfingo ခေါ်လို့ရတာ လူတိုင်းသိပါတယ် ။
ပိုစ့်ကအမှန်ပါ ။ မှန်လွန်းလို့တာင်ခက်နေတာ ၊ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို နွယ်ပင် အလုပ်က သူငယ်ချင်း ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တာ ဆိုတော့ လုပ်ကြံဖန်တီးပြီး တင်တာ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး ။
ဆိုင်မှာ တစ်လ လေး /ငါးသောင်း အားပေးနေတာနဲ့ပဲ ကိုယ့်ထီးအလဲ ခံရတာကို ပြန်ပြောတာ
ဟုတ်သော်ရှိမဟုတ်သော်ရှိ pa tone ကရော ဒီဆိုင်နဲ့ ပတ်သက်နေသူများလား ..
နွယ်ပင်က အင်တာနက်ဆိုင်မှာ Pfingo ခေါ်တဲ့ ကိစ္စကို ဖော်ထုတ်ချင်တဲ့အတွက် ဒီပိုစ့်ကို တင်တာမဟုတ်တာကို ပိုစ့်ကို ဖတ်မိတဲ့ သူတိုင်းနားလည်မှာပါ …
ညီမ နွယ်ပင် …သင်သိသော Pfingo ခေါ်ရသောဆိုင်များကိုဖော်ပြပေးစေလိုပါတယ်….
လွင့် ငယ် says:
နွယ်ပင်ကဒီဆိုက်မှာပိုစ့်တင်တာတော်တော်ကြာပြီ အင်တာနက်ဆိုင်က Pfingo
ပိုစ့်ကိုဖတ်ကြည့်မိသလောက်ကတော့ ဒီခေတ်မှာထီး1ချောင်း ဘယ်ဈေးပဲရှိရှိ
စဉ်းစားဥာဏ်ရှိတဲ့သူတိုင်းက သိမှာပါ ။
ထီးတချောင်းတန်ဖိုးထက် အဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့ ၀န်ဆောင်မူညံ့ဖျင်းတာကိုပြောချင်တာထင်ပါတယ် ။
ခင်ဗျားပြေတာမှန်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်မှမရနိုင်တော့တာ ဘာလုပ်လို့ရမှာ မလို့လဲ….ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတာ သိရက်နဲ့ စကားများရန်ဖြစ်တာဟာကောင်းတယ်ဘဲထားဦးတော့…ကျုပ်ဘယ်သူ့ဘက်မှာလိုက်မပြောဘူးနော်ဦးနောက်နဲ့လိုက်တွေးကြည့်ပါ…ထီးပျောက်သူဟာထီး၁ချောင်းပဲဆုံးရုံးရတာပါ…
ဆိုင်ရှင်မကောင်းသည့်တိုင် သူရဲ့ဖြစ်လာမည့်ပျက်ဆီးနစ်နာမူကို လူလူချင်း ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်နဲ့တွေးဦးမှပေါ့…မတော်ထီးပျောက်သူဟာ သူငယ်ချင်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပြောတော်ရောပေါ့ …အခုဟာက အင်တာနက်ပေါ်တင်.. တင်လဲထားပါဦးတော့ဗျာ……ဆိုင်နာမည်ကိုတော့ သူတပါးစီးပွားရေးကိုတော့ ထိခိုက်တာတော့မကောင်းဘူး..လွန်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်…..လူမှာမှားတာမရှိဘူးလေ…ခင်ဗျားတို့လဲ ကိုယ်ချင်းစာမှပေါ့ဗျာ….အခုအပိုင်းမှာ ထီးဘက်ပါသူများပြီး ဆိုင်ရှင်ရဲ့ အမှားတာဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်…မှန်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ တော်ရုံထက် ပိုပြီးနစ်နာမယ်ဆိုရင် သူများအလွန်ကနေကိုယ့် အလွန်ဖြစ်နေပြီ…ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မွေးကျပါ..ကျုပ်ဆိုင်ရှင်ဝန်ထမ်း နဲ့မည်သို့မှ မည်သူနဲ့မှ မပက်သက်ပါ….စီးပွားရေး လုပ်ငန်း လုပ်သူဖူးသူတိုင်း ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်မှာပါ…
အဲလောက် သည်းခံခြင်းတရားတွေ ပြည့်နေမယ်ဆိုရင် pa tone ရေ ဘုန်းကြီးသာ ဝတ်သွားပါတော့
နွယ်ပင်ကတော့ သူငယ်ချင်း ဘက်ကနေ စဉ်းစားပြီး မခံနိုင်ပါဘူး ကိုယ်တိုင်သာ ဖြစ်ရင် ဒီထက်ဆိုးတဲ့ အခြေအနေတွေတောင် ဖြစ်သွားမလားပဲ ..
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဖူးတဲ့သူဆို ကိုယ့်စီးပွားကို ဘယ်လိုမျိုး ထိန်းသိမ်းပြီး ဘယ်လို ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာ သိသင့်ပါတယ် ။
သူများကိုယ် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ထားဖို့ဆိုရင် ကိုယ့်အတွက်လဲ ပြန်စဉ်းစားရမှာပေါ့ အခုဟာက ဒီဆိုင်မှာ ဒီလိုဖြစ်တာ ဒီတစ်ခါထဲမဟုတ်တာ
ထားပါတော့ ဒီဆိုင်နဲ့ pa tone နဲ့ မပတ်သက်ဘူးဆိုတာ
ဒါနဲ့ နည်းနည်းများ ဆိုင်ရှင်ဘက်က ရေးပေးတာ များလွန်းနေသလားလို့
အရင်ဘဝက ဆွေတော်မျိုးတော်တွေပဲ တော်စပ်ခဲ့ကြတာများလား …..
ဒါဆိုလဲ pa tone ကိုလဲပြောရအုးံမယ် ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆိုင်ရှင်ဘက်ကဆတ်ဆတ်ထိမခံ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေတို့ကလဲလူထဲကလူတယောက်ပဲဆိုတော့ ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုးတွေကိုလက်မခံနိုင်တာတော့အမှန်ပဲ ။ ဒါနဲ့ပြောရအုံးမယ် ဆိုင်ရှင်ဘက်ကအရမ်းနာနေမှတော့ဆိုင်ရှင်နဲ့တခုခုပတ်သတ်နေတာတော့အသေချာပဲ ။ pa toneကို တစ်ခုတော့ပြောချင်ပါတယ် ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုယ့်နဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်ကိုယ့်
မှန်တယ် pa tone ရေ
ကိုယ့်ဆိုင်ကိုအမြဲလာအားပေးနေတဲ့ regular customer တယောက်ကို
Net Sky မှာကတော့တနာရီ500ဘဲ)
pa tone ရေ…ငွေ လေး/ငါးသောင်း သုံးနိုင်သူဟာ ဒီလို ထီး၁ချောင်းနဲ့အောက်တန်းကျလိမ့်မယ်မထင်… ဆိုတော့ ခင်ဗျားပြောတဲ့စကားကရော အဆင့်အတန်းမြင့်ရဲ့လားဗျာ…
ငွေတစ်သောင်းတန်ထီးအတွက် သူက စကားပြောနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး.. ဆိုင်က ညစ်ပတ်ပြီး တာဝန်မယူတဲ့အတွက် ပြောတာလေ… ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် အင်တာနက်က ဖုန်းခေါ်ပေးနေတဲ့ဆိုင်တွေ လုံးဝမရှိတော့ဘူးလို့ ၀န်ခံမထားဘူးမို့လား… ဆိုင်တစ်ချို့က ခေါ်ပေးနေသေးတယ်လေ…ဒီတော့ စုံစမ်းသတင်းနိုက်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား…
ကြည့်ရတာ pa tone ဆိုတာက အဲဒီဆိုင်က တာဝန်မယူတဲ့၊ ညစ်ပတ်တဲ့ ဆိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ အထောက်အပံ့ယူထားတဲ့သူသော်လည်းကောင်း ဖြစ်နေမယ် ထင်တယ်…
ေ၇းပြနေစရာတောင် မလိုပါဘူး အခု pa tone သိတဲ့ အင်တာနက်ဆိုင် (သို့) အင်တာနက်ဆိုင် ခပ်ကြီးကြီးလို နေရာမျိုးကို ဝင်သွားပြီး Pfingo ခေါ်ချင်လို့ပါလို့ ပြောကြည့်လိုက် ဟင့်အင်း မရဘူးလို့ ငြင်းတဲ့ဆိုင်က ခပ်ရှားရှားရယ်ပါ …
pa tone ဆိုတာက ခပ်တုံးတုံးခပ်အအ လူမဟုတ်လောက်တဲ့ အတွက် ဘယ်လိုသွားပြီး ဘယ်လိုမေးရမယ် ဆိုတာကိုတော့ မသင်ပေးတော့ပါဘူးနော်
ခင်ဗျားတို့ကတကယ်တော့ အာကြီးပဲကိုဗျ… ခင်ဗျားပုံစံကြည့်ရတာ နိုင်ငံခြားအဆက်အသွယ် မရှိတဲ့ပုံပဲ… နိုင်ငံခြားအဆက်အသွယ် ရှိတဲ့သူတော်တော်များများမေးကြည့်ပါ ဆိုင်တောတေ်ာများမျာျးျွာမရပါဘူး…အခုခေါ်ဆိုရန်အတော်အခက်အခဲရှိပါတယ်…Pfingo ခေါ်ဆိုမူနဲ့ပက်သက်ပြီး အပိတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဆိုင်များရှိသည်ကို ခင်းဗျားသိမယ်မထင်ဘူးဗျာ …ကျောက်မြောင်း ၊ လသာ ဆိုင်နာမည်နဲ့ နေရာတိတိကျကျတော့မပြောလိုပါ…အစရှိသည့်နေရာများတွင် ၂ဆိုင်ထက်မနဲ ၁လ၂ပါတ် အပတ်ခံရပါသည်…တချို့ စိတ်ညစ်ကာ အပြီးပိတ်သွားကျပါသည်…သတင်းနဲ့ပက်သက်လို့ မပိန်းကျပါနဲ့ဗျာ…ဒါကြောင့် စစ်အစိုးရ၏ လှည့်ကွက်ထဲ သေလိုက်ကျတဲ့လူတွေ မျောလိုက်ကျတဲ့ ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေချည်း…စစ်အစိုးရကလဲ ခင်ဗျားတို့လိုလူများများရှိလေ ကောင်းလေပေါ့ဗျာ…မပိန်းစမ်းနဲ့ဗျာ…
အဲတာ ဆိုရင်တော့ တောမှာပဲ ပျော်နေပါတော့ pa tone ရေ
ဆိုင်တော်တော်များများ ပိတ်သွားတာကို သိပင်မယ့် ခေါ်လို့ရတဲ့ ဆိုင်တွေ အများကြီးပါ …
နိုင်ငံခြားအဆက်အသွယ် ရှိတာ မရှိတာ ၇ှင်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး
ဒီဆိုဒ်မှာ အားအားယားယား မမှန်တာတွေရေးရအောင် အချိန်တွေ သိပ်မအားဘူး
သိသင့်တယ်ထင်လို့ မတရားဘူးထင်လို့ ဝင်ရေးနေတာ…
လုပ်ကြံ ဇာတ်လမ်းရေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလို အပေါစား အောက်တန်းကျတဲ့ ဆိုင်ရှင်အကြောင်းကို မရေးမှာတော့ ကျိန်းသေတယ် …
ပိန်းတာက ဘယ်သူလဲ ……….. စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဦး …… အိုကေနော် ….
pfingo တင်မဟုတ်ဘူး skype ကိုပါကြိုက်သလိုခေါ်လို့ရနေတာ
pa tone မှာကားရှိတယ်ဆိုရန်ကုန်မြို့ကိုကားနဲ့ပတ်ပြီး
မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလောက် pfingo တွေခေါ်တာပိတ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ခေါ်လို့ရနေတယ်
ဆိုတာ pa tone မသိတာတော့အရမ်းအံ့သြမိတယ် ။ နိုင်ငံခြားအဆက်အသွယ်မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့ pa tone ကလဲ ဒီလောက်တောင်မှ မသိဘူးဆိုတော့ ပိန်းတဲ့လူက pa tone များဖြစ်နေမလားပဲ။
သေချာလဲစဉ်စားပါအုံး ။ အာနေတာတွေက pa tone လဲဖြစ်နေအုံးမယ်နော်။
ကျွန်တော်ဆယ်တန်းနှစ်က အိမ်ကလည်းပိုက်ဆံမပို. ကောင်မလေးနဲ.လည်းပြတ်တာ ကျူရှင်ကလည်းအထုတ်ခံရတာနဲ.ညစ်ပြီးအင်တာနက်ဆိုင်သွားထိုင်တာ ဖိနပ်အသစ်ကလေးက ပျောက်
ိုဆိုင်ရှင် အစ်မကလည်း တာဝန်မယူနိုင်တာကို ပြေပြေလည်လည်မပြော စိတ်ဆိုးတာနဲ. ခပ်တည်တည်နဲ.
ပြန်ဟောက် ပြန်ပြောလုပ်လိုက်တာ ရှယ်ရာဝင် အစ်ကိုကြီးက တောင်းပန်မှ ပြန်လာတာ ကိုသတိရမိတယ်
ရွှေဘိုသား ဖိနပ်ပျောက်ခဲ့တဲ့ ဆိုင်က ဘယ်လမ်းမှာလဲ …. ။ Teens များဖြစ်နေမလားလို့ .. အရှေ့ ကုန်းလမ်းမှာလေ … ။ စမ်းချောင်းမှာ …အဲ့ဆိုင် တဆိုင်ပဲ ဖိနပ်ချွတ်ဝင်ရတာ တွေ့ဖူးလို့ … ။ အခုတော့ မရှိတော့ဘူး ထင်တယ် .. ။
ဒီပို့စ်က အမှန်အကန်ပါ … အဲဒီ့ဆိုင်မှာ ဖုန်းခေါ်ဖူးပါတယ် …ဆက်ဆံေ၇းကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ
pa tone ရေ pfingo တွေ ကို အခုထိသုံးလို့ရနေပါသေးတယ် ရှင် ။ လိုင်းကောင်းတာနဲ့ မကောင်းတာပဲ ကွာပါတယ် .. အရင်လို ပေါ်ပေါ်တင်တင်တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ …ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အိမ်က အခုအချိန်အထိ ခေါ်လို့ရနေသေးလို့ပါ ….
ဟုတ်ပါတယ် chitpyae ရေ
ကြည့်ရတာတော့pa tone ဆိုတဲ့သူကဆိုင်ဘက်ကအဲ့လောက်နာနေတာ
တလတလကို ၄/၅ သောင်းလောက်ဖုန်းပြောနေတဲ့သူက
pa tone ဆိုတဲ့သူသိအောင်ကြားကနေ၀င်ပြောလိုက်ပါတယ်
ဒါမျိုးကို အားနာမနေပါနဲ့ … ဆိုင်ကမှားနေတာကို တာဝန်မယူတဲ့ဆိုင်ကို နာမည်ထည့်သာရေးလိုက်ပါ… AKKO ပြောမှ Net Sky ဆိုင်ဆိုတာကို မနွယ်ပင်က ဟုတ်ကြောင်းဝန်ခံတာ မနွယ်ပင်ရဲ့ စာနာစိတ်ကို ပေါ်လွင်စေပါတယ်…
ကျနော် ရန်ကုန်ရောက်ရင်လည်း အဲဒီဆိုင် လုံးဝမသွားဘူးဗျာ…
သုံးစွဲသူ အမှန်ဆိုတဲ့စကား အဲဒီဆိုင်ပိုင်ရှင်က လုံးဝဂရုမစိုက်တာဟာ ရိုင်းစိုင်းတယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်နေပါတယ်…
pa tone မန်းထားတာကိုဖတ်ရတာဘယ်လိုမှသည်းမခံနိုင်ဘူး
ဘားလမ်းထဲကNet Sky ပါ
အဲ့ဒိNet Sky ကဆိုင်ရှင်တရုတ်မကြီးကိုယ်တိုင်ပါ
ပီဖင်းဂိုး အခုထိ သုံးလို့ ရတဲ့ ၊ ပီဖင်းဂိုး ခေါ်လို့ ရတဲ့ ဆိုင်တွေ ရှိသေးတယ် ဆိုတာ အမှန်ပါပဲ
မရှိရင် over sea call ခေါ်ချင်သူတွေ အကုန် ဒုက္ခများကုန် မှာပေါ့ လို့ 
သင်္ကြန်ပြီးပြီးချင်း နှစ်ဆန်း တစ်ရက်နေ့ တုန်းကပေါ့
တရုတ်ပြည် မှာ ဘွဲ့ သွားယူ တဲ့ အမျိုးသမီး ဆီ ဖုန်းဆက် ချင်လို့၊ ဆက်သွယ်ရေးရုံးဘေး က ဖုန်းခေါ်တဲ့ ဆီ သွားမေးကြည့်မိတာ “ တစ်မိနစ် ၁၀၀၀ ကျပ် ” ပါတဲ့
ဈေးချို တာ လေး များ မရှိဘူး လား လို့ ပြန်မေးကြည့်တော့
အင်တာနက်ဆိုင် ကို ပဲ သွားပြောလိုက်ပါတဲ့ ။ အဲဒီမှာ ဈေးသက်သာတယ် တဲ့
မြန်မာဆက်သွယ်ရေး ဝန်ထမ်း က လမ်းညွှန်လိုက်တာနော်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုမျိုးတော့မဆက်ဆံသင့်ဘူး။ ကိုယ့်ဆိုင်လာအားပေးတဲ့ ဖေါက်သည်ကို လေးစားသင့်တယ်။
တော်တော့ နောက်တခါ ထီးထည့်ဖို့ ပလတ်စတစ်အိတ် ယူသွား .. ဘာမှ ပြောစရာမလိုတော့ဘူး
ဘုရားသွားမယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားရင်လဲ ဖိနပ်ထည့်ဖို့ .. အိတ် ယူသွား ..
ဖိနပ်ချွတ်ရတဲ့ အလှူသွားရင် ဖိနပ် ကောင်းကောင်းမစီးနဲ့ ..
ဒါဆိုရင် ရေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ (ရွဲ့တာပါ)
ဘာမှလဲမဆိုင်ဘူးနော် ။ ဘာပြောထားတာလဲမသိဘူး
စုံ စုံ ညီမရေ…ကျုပ်နဲ့အဲဆိုင်နဲ့ဘာမှ မပက်သက်ပါဘူး..Net Sky ကဆိုင်ရှင်တရုတ်မကြီး မှမဟုတ်ဘူး…စီးပွားရေးဆိုတဲ့လောကမှာ ဘယ်တရုတ်တွေကမှ မရဘူး..ဘယ်သူမျက်နှာမှလဲမထောက်ဘူး…ဒါကြောင့်သူမိတ်ပျက်ရတာပေါ့…ဟိုလူကတကယ်တမ်းငွေသုံးနိုင်တယ်ဆိုရင် တကယ်ဖက်ပြီးရန်မဖြစ်ဘူးဗျ…ဒါနဲ့ပြောရမယ်ဆို…ကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်တွေ့ပြောမယ်ဗျာ…ကျုပ်မိုးတွေအရမ်းရွာတဲ့ တရက်ရန်ကုန်မြို့ထဲအရေးတကြီး ရီပို့တင်ရမှာမို့ ကြုံ့ရာ အင်တာနက်တဆိုင်ကိုဝင်သုံးလိုက်တယ်…အဲကျုပ်နောက်ကခပ်သန့်သန့် ကုလားကြီးတယောက်လဲပါလာတယ်…သူလဲထီးပါလာတာတွေ့ရတယ်…ထီးထည့်တဲ့ဗုံးထဲ ကျုပ်ထီးရဲ့ဘေးမှာ ကုလားထီးကအနီတောက်တောက်ကပ်လျက်လေးဗျာ…အဲ ဆိုင်မှာခုနကလိုပဲဆိုင်ရှင် ဗမာကြီးကိုယ်တိုင်ထိုင်တာဗျာ ..ကျုပ်မပြန်ခင်မှာ အဲကုလားကအရင်ပြန်ရော သူထီးရှာတော့မတွေ့တာနဲ့ ကုလားက ဆိုင်ရှင်ငါထီးအသစ်ကြီးဘယ်ရောက်သွားလဲ…ဒါနဲ့ဆိုင်ရှင်က ဟာာ ပျောက်သွားပြန်ပြီလား ကျုပ်လဲသတိထားပေးနေတာပဲဗျာ မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်တတ်နိုင်ပါမလဲတဲ့ ဆိုင်ရှင်က ကျုပ်လျှော်ပေးရအောင်လဲ ၁ နာရီမှ ၃၀၀ တည်းရတာဗျာ ခဏခဏဒီလိုဖြစ်တယ်..ရဲ တိုင်တော့လဲတိုင်တာပဲ သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာ ဒါနဲ့ ကုလားက အေးပါဗျာ ကျုပ်ကိုက စည်းမရှိတာနေပါစေ ရပါတယ်ဗျာဆိုပြီး မိုးရေထဲထွက်သွားလေရဲ့…အဲကျုပ်ပြန်တော့လဲ ထီးပျောက်နေတာတွေ့ရတယ်…ဒါနဲ့ဆိုင်ရှင်က ဟေ့ဒီမှာညီလေးမင်းမကျေနပ်လဲမတတ်နိုင်ဘူးကွာ (ဆိုင်ရှင် တနေ့ကုန် ဒီကေ့စ်ရှင်း ရကာစိတ်မရှည်သောလေသံဖြင့်)အဲဒီမှာကြိုက်တဲ့ထီးယူပြန်ကွာတဲ့ဒီလိုတော့မကောင်းပါဘူးဗျား..ဒါနဲ့ကျုပ်ကားဆီတစိတ်လောက်လိုက်ပို့ပေးပါလား.. .ဟေ့ကောင်မင်း ကဘာကောင်မို့လို့ ငါကမင်းကိုထီးမိုးပေးရမှာလဲ. .ကျုပ်ကဖြစ်ချင်တော့ ယူနီဖောင်းကြီးနဲ့ သူကြည့်ရတာစစ်သားစစ်တပ်တွေကိုတောတော်မုန်းပုံပေါ်တယ်…(ကျုပ်ပြသာနရှာရင် ဒီလူဆိုင်ပိတ်းပြီး အချုပ်ထဲရောက်လောက်ရောပေါ့ ) အင်း..ဒါနဲ့ ကျုပ်လဲ အော်…လူမျိုးခြားဘာသာခြားတောင်သီးခံတတ်သေးတယ် ဆိုပြီး ကျုပ်လဲ အောက်သီးအောက်သက်နဲ့သာ. မိုးရေထဲထွက်လာရတယ်ဗျာ…..ကဲဘယ်နရှိစ…. ကျုပ်ဒါမှမဟုတ်ကုလားသည် ပြသာနာရှာစကားများခဲ့သည်ရှိသော် မည်သူမှအကျိုးမရှိ ဆိုင်ရှင်နေရာကခံစားပြန်လဲ သူက၁နာရီမှ ၃၀၀ ရတာကို ဒီလိုသာရောက်ပေါက်စေ့ရှင်းနေရမူ သူလဲမသက်သာ.. .ရဲတိုင်ပြန်တော့လဲကိုယ်ဘက်ကပေးတာကြွေးတာပဲရှိ…. အင်းးး သူသူကိုယ်ကိုယ်စဉ်းစားပေါ့ဗျာ….ကျုပ်ပြောချင်တာကစဉ်းစဉ်းစားစားယုံဖို့ရယ်…Pfingo ကအခုအချိန်မှာနေရာတိုင်းခေါ်လို့ကိုမရတာ. .နိုင်ငံတော်ကခေါ်ခွင့်မပေးတာဟေ့.. .ခေါ်ရင်ဖမ်းမယ်ထောင်ချမယ်တောင်ဆိုသေး. .နားလည်လား…၎င်းတို့နဲ့ပက်သက်တာတွေလောက်ဘဲရတာဟ…ခင်ဗျားတို့ကနိုင်ငံရေးအကြောင်း လှည့်ကွက်အကြောင်းဘာမှမသိနဲ့.. .ကျုပ်ကခပ်ရှင်းရှင်းပြောရရင် ဟိုတလောကအဆိုတော် ထွန်းထွန်းသေတယ် ရဲလေးသေတယ်ဆိုတာ ကျုပ်တို့စစ်ဘက်ကစပြောတာဟေ့ အထက်ကဒီတိုင်းဒီအချိန်မှာပြောဆိုလို့ပြောတာဟေ့ ရှင်းပလား….ဒါတွေပြောရတာကျုပ်ပြသာနာတက်ရင် အလျှော့ခံရမှာဟ.. .အော်..စေတနာနဲ့တခုတော့သတိပေးပါရစေ အင်တာနက်ဆိုင်တချို့မှာ စစ်ဘက်ကကျုပ်လို ရီပို့တင်နေတဲ့သူအများရှိတယ်နော်… မတော်လို့ ကော့စ်ငြီ့ ရင် သေပြီသာမှတ်…ကျုပ်လဲ စစ်ဘက်က အရာရှိပဲ..ဒါပေမဲ့ကျုပ်က စစ်ဘက်ဆိုင်ရာမုန်းတီးရေးဗျ… ကျုပ်ပြောရရင်ဇတ်ရှုပ်ကုန်မယ်…….ခင်ဗျားတို့ ရေးတဲ့ပို့စ်က ချိတ်ချိတ် ချင်းမလို့ငြိတာပါ…ကျုပ်တို့တုံးကလျှော်ပေးလိုက်တာဘဲ…လူဆိုတာကိုယ့်ဘက်သူဘက်ဆိုတာရှိတယ်…နားလည်ရတယ်…တကယ်တော့ ဗုဓ်ဒ ဘာသာနိုင်ငံမှာ မစ်တာတရား တွေခေါင်းပါးနေတာအမှန်ဘဲ… ကျုပ်ရေးသားရှင်းလင်းချင်းကို ဗမာလူမျိုး ဗုဓ်ဒ ဘာသာ တွေနားလည်နိုင်မည်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်…. ဘာသာခြားကုလားလောက်တောင် စိတ်ဓါတ်မမြင့်မြတ်ရင် ဗုဓ်ဒ ဘာသာ ဖြစ်ရတာ ရှက်ဖို့အင်မတန်ကောင်းပါရဲ့ဗျာ…. ပီအက်စ
ကျုပ် သုံးခဲ့တဲ့ဆိုင်နာမည်တော့မဖော်ပြလိုပါ…သူတပါး၏ စီးပွားရေးလူမူရေးကိုအလေးထားခြင်းကြောင့်သာ….ကိုယ်ကြောင့် သူတပါးမပျက်ဆီးပါစေနှင့် ချမ်းသာပါစေလားဗျာ…မိမိကတာမစ်တာထားမယ်ဆိုရင်လောကမှာသူ့ ကြ့မ်မာ သူဖန်တီးလာပါလိမ့်မယ်…အမျန်တကယ်မှာ စစ်တပ်မကောင်း ရဲမကောင်း…အဏာအလွဲသုံးစားမူများကြောင့်သာ ကျုပ်တို့ဗုဓ်ဒ ဘာသာ နိုင်ငံပျက်ဆီးရခြင်းသာ .နိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သူ 70% ခန့်ပျက်ဆီးနေကျသည်
pa tone ငပေါ ပေါက်တတ်ကရတွေ ပြောမနေနဲ့။
စစ် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ပြောလိုက်။
စစ်ဘက် အရာရှိ ပြောလိုက်နဲ့။
ထီးပျောက် လို့ ရန်ဖြစ်တာ ၊ ဆိုင်ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှု အကြောင်းပြောနေရာက
ဗမာပြည် မှာ ဖြစ်နေကျ ဇာတ်လမ်းတွေပါ။
ဆက်ဆံရေး မကောင်းယင် အဲဒီဆိုင်ကို ရှောင်ကြပါ။
မဆိုင်တဲ့ အပေါက် ဂလိုင်နဲ့ ခေါက် ၊ ပေါက်ကရ တွေဝင်ပြော။ ငပေါ – ။
pa tone တဲ့လား။ မှတ်ထားရအုံးမယ်။
နာမည်ကလည်း … နာနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် … pa tone တဲ့ .. ယို့ ယို့ ယိုးးးးးးးး
ပြောချင်တာက နည်းနည်း ..သူစစ်တတ်ကလူ ဖြစ်ကြောင်းကြွားနေတာ ကများများ ဟွန်း
(ကျုပ်ပြသာနရှာရင် ဒီလူဆိုင်ပိတ်းပြီး အချုပ်ထဲရောက်လောက်ရောပေါ့ ) တဲ့ ယုံကြည်မှူကတော့ အပြည့်ပါပဲ ..ယူနီဖောင်း အားကိုးနဲ့ … အလွန်ဆုံး ပြသနာ တတ်လျှင် ရုံးရောက်ရုံပဲရှိမယ် ဆိုင်ပိတ်ရလောက်တဲ့အထိ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူး …. သိပ်ပိုတာပဲ ။
(ဟိုလူကတကယ်တမ်းငွေသုံးနိုင်တယ်ဆိုရင် တကယ်ဖက်ပြီးရန်မဖြစ်ဘူးဗျ) တဲ့လား… သူများ မသဒ္ဓါရေစာ စားသောက် ၊ တောင်းရမ်း၊ အနိုင်ကျင့်ပြီး ရလာတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ၀ယ်ထားတာမှ မဟုတ်ပဲ ချွေးနည်းစာ နှမျောတာပေါ့ … ကျုပ်ဆိုလျှင် ကိုယ့်လုပ်အားနဲ့ ၀ယ်ထားတဲ့ ပစ္စည်း ကိုယ့်ပယောဂမပါပဲ အလေ့လွင့်ဖြစ်ရလျှင် နှမျောလို့ မဆုံးဘူး ။ သူများဆီက အလကား ကပ်စားပြီး လာဘ်ဆောင်ရနေတဲ့လူတွေ ဒီလို ခံစားချက်မျိုး နားမလည်တတ်ဘူးလေ ။
pa tone ရေ နွယ်ပင် ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်ကို သေသေချာချာလေး ဖတ်ကြည့်ပါဦး
ရေးထားတာ အခု pa tone တို့ ကြုံခဲ့တဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်ကလို ထီးထည့်တဲ့ပုံးကို အသုံးပြုတာ မဟုတ်ဘူးလေ ။နံပါတ်ပြား တစ်ခုကို အပ်ခဲ့တဲ့ထီးမှာချိတ်ပေးပြီး တစ်ခုကို အပ်တဲ့သူကို ပြန်ပေးတာပါ ဒါဆိုရင်တော့ ဆိုင်က တာဝန်ယူရမှာလေ .. ထီးကို အပ်ခဲ့သူက ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ထီးကိုယူခွင့်မရှိဘူး ဆိုင်က ယူပေးမှရတာပါ ဒါတောင် ဆိုင်က တာဝန်မရှိဘူးလို့ပြောတာ ဘယ်သူ့ဘက်က လွန်တယ်လို့ တွေးမိပါသလဲ ……
နွယ်ပင်တို့က သည်းခံခြင်းတရားကို နားလည်ပင်မယ့် သူကလဲ မှားသေးတယ် သူကလဲ ပြန်ခံပက်နေရင်
လူပဲ ပြန်ပြောမိတာ မစမ်းပါဘူး ဒါကို pa tone (ထီး၁ချောင်းနဲ့အောက်တန်းကျလိမ့်မယ်မထင်) လို့ရေးထားတာက ဆိုင်ရှင်ဘက်က လူလား လို့ ထင်မိတာ မဆန်းပါဘူးလေ ..
နောက်ပြီး အခုရေးတဲ့ ကွန်မန့်မှာလဲ မဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အများကြီးပဲပြောထားလို့ ဘာကို ဆိုလိုချင်မှန်းတောင် မသိပါဘူး ။ pa tone ဆိုတာ ဘယ်လိုလူပဲဖြစ်နေစြေ်နေ ဒီဆိုဒ်မှာ လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်ရှိတာမို့ ကိုယ်ထင်တဲ့ မကြိုက်တဲ့ မတရားမူတွေကို ရေးပြနေဦးမှာပါ ….
လူတစ်ကိုယ် အကြိုက်တစ်မျိုးမို့ လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲခွင့်၇ှိပါတယ် ။
ဒီမှာ Pa tone ရေ
ရှင်သုံးခဲ့တဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ကဒီNet Sky ဆိုင်လို တုံကင်နံပါတ်ပြားနဲ့
ဒီ Net Sky ဆိုင်မှာကကျမအပါအ၀င်သုံးသူအားလုံးတုံကင်နံပါတ်ပြားနဲ့
မှန်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ တော်ရုံထက် ပိုပြီးနစ်နာမယ်ဆိုရင် သူများအလွန်ကနေကိုယ့် အလွန်ဖြစ်နေပြီ…ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မွေးကျပါ..ကျုပ်ဆိုင်ရှင်ဝန်ထမ်း နဲ့မည်သို့မှ မည်သူနဲ့မှ မပက်သက်ပါ….စီးပွားရေး လုပ်ငန်း လုပ်သူဖူးသူတိုင်း ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်မှာပါ…
လူလူချင်း ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်နဲ့တွေးဦးမှပေါ့…မတော်ထီးပျောက်သူဟာ သူငယ်ချင်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပြောတော်ရောပေါ့ …အခုဟာက အင်တာနက်ပေါ်တင်.. တင်လဲထားပါဦးတော့ဗျာ……ဆိုင်နာမည်ကိုတော့ သူတပါးစီးပွားရေးကိုတော့ ထိခိုက်တာတော့မကောင်းဘူး..လွန်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်…..လူမှာမှားတာမရှိဘူးလေ…ခင်ဗျားတို့လဲ ကိုယ်ချင်းစာမှပေါ့ဗျာ….အခုအပိုင်းမှာ ထီးဘက်ပါသူများပြီး ဆိုင်ရှင်ရဲ့ အမှားတာဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်…မှန်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ တော်ရုံထက် ပိုပြီးနစ်နာမယ်ဆိုရင် သူများအလွန်ကနေကိုယ့် အလွန်ဖြစ်နေပြီ…ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မွေးကျပါ..ကျုပ်ဆိုင်ရှင်ဝန်ထမ်း နဲ့မည်သို့မှ မည်သူနဲ့မှ မပက်သက်ပါ….စီးပွားရေး လုပ်ငန်း လုပ်သူဖူးသူတိုင်း ဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်မှာပါ…
ကလေးနဲ့လူကြီးမှာ ဘယ်သူကပိုပြီး နားလည်ပေးရမလဲ
ကဲ…အခုဟာကဆိုင်ရှင်ကခင်ဗျားတို့လောက်မှနားမလည်တဲ့သူကိုဒါကြောင့်သူ့စီးပွားရေးနစ်နာမှာကိုမတွေးတာပေါ့…ဒါကိုလူကြီးလုပ်တဲ့ခင်ဗျားတို့က တော်ရုံပြောပေါ့ဗျာ အခုဟာကတဘက်စောင်းနင်းရာရောက်နေပြီ ကျုပ်ဆိုင်နာမည်ပြောရင်လက်ခံပါတယ်…သူအလွန်ကကိုယ်အလွန်ဖြစ်နေပြီဗျာ…ကှုပ်လဲအဲဆိုင်ကိုမသွားချင်တော့တာအမှန်ဘဲ…ခင်ဗျားတို့လဲဘယ်သွားချင်ပါ့မလဲ…အင်း..နောက်ထပ်ဖတ်မိသူများလဲထိုနည်းတူဘဲ..ဒီလိုသာဆို သူဆိုင်၏ပျက်ဆီးမူက ထီး(၁၀)လက်စာမကပျက်ဆီးနေပါပီဗျာ…ခင်ဗျားတို့ဟာဗုဓ်ဒဘာသာတွေဖြစ်ကျမယ်ဆို သူများရဲ့ ဝဋ်ကို မိမိက ဝဋ်အသစ် မယူချင်ပါနဲ့ဗျာ… တော်ရုံပေါ့ဗျာ…ကဲကဲ ခင်ဗျားတို့နဲ့လဲ ကျုပ်မမြင်ဘူးပါဘူး ထိုဆိုင်ရှင်နဲ့လဲ မမြင်ဘူးပါဘူးဗျာ….အဲနိုင်ငံရေးနဲ့ပက်သက်လို့ကတော့ပြောဗျာအကြိုက်….ကျုပ်လဲကြိုက်တယ်…
ဟုတ်လား အော်အော် pa tone ဟောတဲ့ တရားပေါ့
ဆိုင်ရှင်က ထီး (10) လက်စာ နစ်နာသွားတယ်ဆိုတော့ pa tone က စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာလား
အဲတာဆိုလဲ ၇ှင်ပဲ အဲ့ဆိုင်မှာ သွား သုံးပေးလိုက်ပေါ့ နောက် ထီးအလှူလဲ ပေးခဲ့ပေါ့
အခုဟာက ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပြန်တွေးကြည့်လိုက်ပါဦး
ရှင်သာ ဆက်ပြီး အရစ်မရှည်ရင် ဒီဇာတ်လမ်းက ဒီမှာတင်ဆုံးနေပြီ
အခုတော့ ရှင်က ဆိုင်ရှင်ဘက်က မနာဘူးမနာဘူးအော်နေပြီး အရစ်တွေ အထွန့်တွေတက်နေတော့
မဆိုးပါဘူး ဒီလိုနည်းနဲ့ဆိုတော့ လူပိုသိပြီး ဖတ်မိတဲ့ လူပိုများလာတော့ တမင်တကာတောင် ဒီဆိုင်က မကောင်းဘူးဆို ကြော်ငြာပေးစရာတောင် မလိုအပ်တော့ဘူးနော် …
ကျေးဇူးပါပဲ …. pa tone
pa tone ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ စစ်ဖက်ကအရာရှိကြီးရေ
ရှင့်ရဲ့မားမားဖြစ်ဖြစ် မမဖြစ်ဖြစ် တနည်းနည်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့
ဒီဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုပြောပြလိုက်ပါ ဒါမှမဟုတ်လဲဒီ ပို့စ်ကိုပေးဖတ်လိုက်ပါ
pa tone နဲ့တကွပတ်သက်သူတွေအားလုံးသိစေချင်တယ်
့ဒီ Pa tone ဆိုတဲ.လူကြီး comment တွေ ကြည်.ရတာ တခုခုတော. မှားနေပြီလို. ထင်သား.. လက်စသတ်တော. စစ်ဘက်က အရာရှိကြီး ဖြစ်နေတာကိုး… ဒါကြောင်. အဲလောက် ဒုံးဝေးနေတာ…
ဗျိုး..ဗဂျီးဘု ဘယ်ထန်းတောမှာ မူးနေသတုန်း၊ ကြောင်ကြီးဆိုင်းသံကြားရင် ဝင်ကလှည့်ပါအုံး….
ဟိုလူကြီး တော်တော့. ပတုန် လား ဘာလား..
မတော်ရင် ပတုန် မှ ပတူး ဖစ်တော့မယ်……… ~x(
ကျုပ်ဆိုရင်လည်း စေတနာရှိလို့ အလကားပေးရင်ပေးလိုက်မယ်…ဒီလို အမှားကိုမတောင်းပန်ဘဲနဲ့ ကျောသလို လာလုပ်လို့ကတော့၊ ဒီဆိုင်မှာ pfingo သုံးလို့ရနေသေးပါတယ်ဆိုပြီး..ချက်ချင်းရဲသွားတိုင်ပလိုက်မှာ..
အဲလိုဆက်ဆံရေးကျဲနေမှတော့..အဲဒီဆိုင် မဖွင့်တာမှကောင်းဦးမယ်.. ကျွန်တော်ဆိုတစ်ခါသွားပီး မသွားတော့ဘူး